လျှပ်စစ်မီတာခ လျော့ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? – Sunthit Myanmar
လျှပ်စစ်မီတာခ လျော့ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
တစ်လတစ်လ တဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခ ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့် စိတ်မအေးရဘူးလား။ သင့်အနေနဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခကို ဘယ်လိုချွေတာရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ခေတ်မီကောင်းမွန်တဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံနဲ့ နေထိုင်ဖို့အတွက် လေအေးပေးစက်ဆိုတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကို မလွဲမသွေအသုံးပြုမှာပါ။ လေအေးပေးစက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ လျှပ်စစ်မီတာခ သက်သာအောင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ အိမ်မှာ လေဝင်လေထွက်ကောင်းပါက အပူအအေးလိုအပ်မှုကို မျှတစေပြီး လေးအေးပေးစက်ကို လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး သုံးစွဲမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် လုံလောက်တဲ့ airflow ရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင် မီတာခပိုမသုံးမိစေဖို့အတွက် လေအေးပေးစက်မှာ ဖုန်တွေ၊ အမှိုက်တွေနဲ့ ချေးတွေပိတ်မနေစေဖို့လည်း လိုပါတယ်။
လက်နဲ့အဝတ်လျှော်ရတာက ငြီးငွေ့စရာဖြစ်တာရော အချိန်မပေးနိုင်တာကြောင့် အဝတ်လျှော်စက်တွေကို ဝယ်ယူအသုံးပြုကြပါတယ်။ အဝတ်လျှော်စက်အသုံးပြုတာနဲ့အတူတူ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုလည်း ပိုလာပါတော့တယ်။ ဆိုးကျိုးကတော့ မီတာခကို ပိုမိုပေးဆောင်ရမှာပါ။ အဝတ်လျှော်စက်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာ မီတာခသက်သာအောင် ဘယ်လိုသုံးစွဲနိုင်မလဲ?
အဝတ်လျှော်စက်ရဲ့ heat level ကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ပြီးအဝတ်လျှော်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် cold setting နဲ့လျှော်ပါ။ ဒီထက်ပိုပြီး လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချချင်ရင်တော့ dryer နဲ့ပါ တွဲပြီးလျှော်နိုင်ပါတယ်။ညဘက်မှာဆို မီးအားပိုကောင်းတာကြောင့် ညဘက်အဝတ်လျှော်ရင် မြန်မြန်ပြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုကိုလည်း ချွေတာရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
Published November 10, 2017 By sanlenaing
Categorized as How To Tagged လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေလ်ာ႔က်ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?